Ukuhamba ebaleni lokudlala ngosuku lwehlobo kuyinto ukuhleka nenjabulo. Kodwa ingabe kunjalo njalo, futhi kulula yini ukufundisa ingane indlela yokuziphatha kahle emgwaqweni?
Uhlobo luni lomntwana olungathandi ukuhamba endaweni yokudlala: ekhuphuka phezulu emhlabathini ngokugijima, egibela entabeni, ejikeleza ezungeze i-carousels, ehamba nge-sandbox? Yiqiniso, konke! Kodwa-ke, kukhona ukuhlukumezeka - ngokusho kwezibalo, namuhla endaweni yokudlala izingane zalimala zingekho ngaphansi kwengozi. Lokhu kungenxa yokuthi thina bazali asikhokha ngokufanele ukuphepha kwezingane endaweni yokudlala. Kodwa bona, le mithetho, encane kakhulu, siyoyiqonda?
Ukuqinisekisa ukuthi ukuphepha kwengane ukuhamba kuyakwenzeka kithi, sidinga nje ukuba siqaphe kancane futhi siqaphe. Imithetho yokuziphatha kusayithi kulula kakhulu ukufunda ngaphandle kwemithetho efanayo yomgwaqo, kodwa izinzuzo ezivela kubo azikho ngaphansi.
Esikhathini ngasinye isayithi kukhona izingane ezihamba ngaphandle kokuqondiswa kwabazali. Ukusho ukuthi lokhu kubi wonke umuntu akunakwenzeka. Kubi uma ingane ingakulungele lokhu. Ngokuqinisekile, ngamunye wenu angakhumbula ukuthi wayehamba egcekeni yedwa esemncane. Kodwa ngaphambi kokuba ushiye ingane yakho, hlola ukuthi uyahamba yini ngokuzenzekelayo noma ubalekela ngemva nje kokukhumbuza kwakho, indlela yokusebenzisa i-carousels, njll. Yiqiniso, ungakwazi ukubuka i-crumb yakho efasiteleni, kodwa ingabe uzothola amandla nokuqina uma kwenzeka into ethile ingena endlini? Uma ungumuntu wezemidlalo ekugijimeni, kungenzeka ukuthi kungenzeka, kepha uma kungenjalo? Ngakho isiphetho: noma uthathe ukugijima, noma uhambe nomntwana aze aqonde imithetho eyisisekelo. Ingozi ibonakala kakhulu kusuka kude, futhi ngubani, uma engekho umuntu wesilisa, angazibikezela futhi azivimbele.
Umthetho No. 1
I-ambulensi endaweni yokudlala iyisithameli esivamile. Okunye kokulimala okuvame kakhulu kukhona ukulimala okuqhubekayo ekuguquleni noma eduze. Ukugubha insimbi yensimbi kuyingozi enkulu. Angamlimaza kakhulu ingane. Ngakho-ke, abazali, okokuqala, kufanele bachaze ukuthi kudingekile ukubamba ngezandla zombili futhi ngokuqinile. "Ngeke ubambe, ngizoyeka," umama uthi kumntwana owodwa nengxenye, bese eqala ukuqonda lo mthetho, nezixwayiso ezifana "Ungasondeli abantu abagijimayo", "Ungazami ukuhamba ngezinyawo ngenkathi ugibele," kufanele uzwakale, "Ungagxumi ekujuleni kwesibhakabhaka - uma kungenjalo usengozini yokuthola isihlalo esihlokweni", "Ngixwayise uma ufuna ukuhla phansi", "Shaya ukuzulazula," "Sika umngane, uphonse u-swing kusuka ohlangothini, hhayi ngaphambili nangemuva." Ngaphezu kwalokho, kunezikhathi ezithile , okumele kunakekele i-ro Itel - isimo lobuchwepheshe jika, njengoba akuzona zonke nezinsiza zokudlala uphelele futhi, ngaphezu kwalokho, njalo ukubheka zonke izihibe bebelokhu operation, esihlalweni abupheli, futhi idizayini uqobo kwaba ezinzile ..
Umthetho No. 2
Uma ugoqa, ubambe ngokuqinile, hlala uhlale.
I-Carousel inhle kakhulu. Ngaphambi kokuba uvumele ingane ukuba igibele kuyo, nikeza imiyalo: gcina uqinile, hlala uhlale, uhambisa i-carousel ukugwema. Kubalulekile ukuthi ingane ingagxili ekuhambeni.
Umthetho No. 3
I-carousel esontekile iyingozi!
Kunezindlela ezimbili zokuthola ukuthi kulula yini ukufundisa ingane indlela yokuziphatha kahle emgwaqeni. Ungahlala esihlalweni futhi ubambe ngokuqinile noma ume kude.
Amabhayisikili cishe wonke umntwana, kepha imithetho yokuphepha kwebhayisikili ayaziwa wonke umuntu. Owokuqala - abahamba ngebhayisikili kufanele agibele ezindaweni ezikhethiwe ngokukhethekile - kulezi zindlela ze-asphalt. Epaki ngayinye ungathola amathrekhi anjalo, ezindaweni eziningi zokudlala, kude nokuguqulwa kanye ne-carousels. Umgwaqo ongaseceleni kwendlu, umgwaqo wesikole - kodwa hhayi umgundundane wesanti eduze nokuguqulwa - kufanelekile ukuhamba ngebhayisikili. Uma uhambisa ibhayisikili kumntanakho, mchazele lokhu akuwona umthetho obunzima kangaka, ngoba, egibela esiteshini, akayikulimaza yena kuphela, kodwa futhi nezinye izingane. Emgwaqweni, kufanele uhambe ngokucophelela kakhulu: kunengozi enkulu yokukhwela izimoto ezimisiwe, ukushaya phansi abantu abahamba ngezinyawo ngisho nokuwa ngaphansi kwamasondo ahamba eduze kwelokuqapha imoto. Abazali bamabhayisikili amancane kudingeka baqaphele amabheji abonakalayo ngaphambili nangemuva kwebhayisikili.
Umthetho No. 4
Abagibeli bamahhashi kumele bagibele amathrekhi asphalt ngaphandle kwezinguquko kanye nama-carousels futhi bangahambi nezimoto ezihambayo.
Kusuka egqumeni kuya enkundleni?
Uma kuqhathaniswa ne-carousel, intaba yezingane ayibuhlungu kakhulu, kodwa ibuye ilandele imithetho eminingana. Okokuqala, kuyinto efiselekayo ukuhamba nge-drive eyodwa ngasikhathi sinye, futhi uma laba bantu banquma ukwakha "indawo yokuhlala", kuyisibopho, ngaphansi kokuqondiswa kwabantu abadala, futhi babambelela ngokuqinile komunye nomunye: uma ingane igobile kodwa ingakakhululi u-hill, olandelayo, ulinde phezulu, ukubekezela, kungenjalo kuyokwenqabela nje ingane yangaphambilini.Izinqwaba eziningi zithanda ukukhuphuka intaba kanye nokuphakama ukuze zihlolwe izikhala zomdabu. Kungenzeka ukuqonda ingane - isetshenziselwa ukubuka yonke indlela kusukela phansi kuze kube manje, bese kuthi ngokushesha. , kodwa, ngokubonakalisa Uma ingane ingakulungele ukushayela indiza, ingase ishaye noma isabe nje, ngakho-ke abantu abadala kufanele balungiselele lesi simo futhi.Ungavumeli ukuba ingane ihlale isikhathi eside enqabeni: ngemuva kwakho konke, kukhona umgca wokugcina imvuthuluka, futhi, ngaphandle kwalokho Futhi, ungavumeli ingane ukuba iqhube enye emgqeni - ukujabula okugibelayo kungukuthi, futhi okungalungile - ukuhamba konke. Lesi yisikhathi sokucabanga: kungenzeka yini ukuvumela ingane ukuba ihambe kuleyo mishini eyingozi? Futhi qaphela ukuthi i-hill yayingeyona ingodo, kungenjalo bekungeke kwenzeke ngaphandle kokwahlukana.
Umthetho No. 5
Ekhasini elilodwa, ungasheshi, ungahlali isikhathi eside, qaphela izimpande.
Umthetho olandelayo usebenza nakwegquma. Akudingekile nje ukuthi ufundise ingane ukuthi iphathe ngendlela efanele egqumeni, kodwa futhi ukukhetha ngokuhlakanipha - lapho ungakhamba khona nalapho ungenzi khona. Intaba efanayo ngezikhathi ezahlukene zonyaka ingaba yingozi futhi iphephile. Lapho sekushisa, amagquma ashisa, ahlanganisa neqhwa elangeni ngosuku olubi lwebusika, futhi ijubane lezindiza liphuma kabili. Ngaphezu kwalokho, kunezlayidi lapho i-angle yokuthambekela iwukuthi lapho ukufika emhlabathini kungenakugwema. Into engcono kakhulu ongayenza ngaso sonke isikhathi lapho ufika ebaleni lokudlala, uhlaziye isimo semishini futhi ubeke amazwana kumntwana, ungakwazi yini ukugibela manje (futhi kungani). Ngokuhamba kwesikhathi, izinyane lizoqonda ukuthi yini, futhi uzokwazi ukuthola iziphetho.
Umthetho No. 6
Khetha islayidi nengqondo.
Futhi amagama ambalwa mayelana ne-sandbox. Ngaphambi kokuvumela ingane ukuba idlale kuyo, hlola izingqikithi zayo nokuqukethwe. Ngokuvamile ungabona izipikili eziphuma ngaphandle kwefreyimu, ama-cobbles esikhundleni sesihlabathi, futhi ngokuvamile izinto eziningi ezithakazelisayo. Qaphela ukuthi abantwana abawuthululi umhlabathi phakathi komunye nomunye, ungadli "okuphekwe ngamabhakede okudla", ungaxabani ngezifo ze-spatula, nakuba empeleni, kuyi-sandbox, ingozi iyinto encane kakhulu.
Isikripthi seSepthemba 1 esikoleni ngo-2016-2017 ngonyaka wezifundo - umbusi. Imibono yoLwazi lweSuku lwe-Ulwazi enkulisa, ebangeni lesi-11, labalandeli bokuqala
Indlela yokulungiselela ukuzalwa kwengane - ebaluleke kakhulu ekutholeni impilo ejabulisayo
Unyaka omusha wengane encane
Owesifazane ozayo: izici zemfundo yamantombazane
Ama-eggplants nge ushizi kanye negalikhi
Imikhumbi yezikhwama-2017: TOP-3 yemikhiqizo yasekhaya
Iphepha noma i-electronics njenge-notebook?
Ubumba obomvu olubhekene ne-cellulite
I-Wicker pie cherry
I-Pilaf ngamabhontshisi abamnyama, i-peas kanye ne-izaqathe
Utamatisi uphahla esikolweni
Amathiphu alula ekudayeni izinwele ekhaya
Siqoqa ingane eklasini lokuqala. Yini okufanele ngiyithenge?
Kuthiwani uma umyeni wami enesihluku, esaba?
Indlela yokulungisa izinwele ezimele? Amathiphu womculi wezinwele